अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले आजबाट काम सुरु गर्दै , डा. केसी अल्मलिए | | Nepali Health
अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले आजबाट काम सुरु गर्दै , डा. केसी अल्मलिए
२०७२ माघ ११ गते ११:२३ मा प्रकाशित
नेपाली हेल्थ /काठमाडौँ -सरकारले शुक्रबार गठन गरेको उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगले सोमबार(आज)बाट औपचारिक रुपमा काम थाल्ने भएको छ । आयोगका पदाधिकारीलाई सरकारले हिजो आइतबार नियुक्तिको पत्र दिएपछि आजबाट काम सुरु गर्न लागेको हो ।
आयोगका कार्यकारी निर्देशक प्राडा भगवान कोइरालाले आज दिउसो शिक्षा मन्त्रालयमा आयोगको पहिलो औपचारिक बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए । नेपाली हेल्थसंग कुरा गर्दै उनले बैठकको एजेण्डा ऐन तथा नियम बनाउने कार्यमा केन्द्रीत रहने बताए ।
‘हामीलाई धेरै अधिकार दिइएको छैन । नीति बनाउने जिम्मेबारी दिइएको छ । हामी त्यसैमा केन्द्रीत हुन्छौँ । हिजो अनौपचारिक छलफल भयो आज औपचारिक बैठक बस्दैछ । आयोगले आजैबाट कामको थालनी गरयो भन्दा हुन्छ ‘ नेपाली हेल्थसंग डा कोइरालाले भने ।
उनले आयोगको कार्यालयको खोजी भइरहेको भन्दै तत्कालका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर काम गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘हामी कार्यालयको खोजी सुरु गरेका छौँ । त्यो नहुँदासम्म शिक्षामन्त्रालयबाट काम सुरु गर्नेछौँ ।’
डा केसी अल्मलिए
सोमबारबाट आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका प्राडा गोविन्द केसीले अनसन सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय लिएका छैनन् । आइतबार मात्रै ४४ जना नागरिक अगुवाले सरकार र संसदलाई प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता लिन र डा केसीलाई पनि तत्कालको अनसन कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । सो आग्रह पछि केसीले अनसन जारी सुरु गर्ने आफ्नो पूर्वघोषित कार्यक्रममा पुर्नविचार हुन सक्ने बताएका छन् ।
सोमबार विहान नेपाली हेल्थसंग कुरा गर्दै डा केसीले बेलुका चार बजेसम्म निर्णय लिने बताए । उनले भने, ‘स्वतन्त्र बुद्धिजिवी तथा नागरिक अगुवाहरुले हिजो विज्ञप्ती निकालेर अनसन तत्कालका लागि स्थगित गर्न भन्नु भएको छ । यसले गर्दा म अहिले छलफलकै क्रममा छु । अनसन बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा चार बजे निधो हुनेछ ।’
प्रतिष्ठान बनाउने विधेयकमा समेत चर्को विरोध भएपछि प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले सबै सेयर सदस्यलाई आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।
सितापाइलास्थित अस्पतालमा हुने बैठकमा विधेयकको विरोधको अवस्थालाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा सेयर सदस्यसंग छलफल गर्ने तयारी गरको छ ।
आज बैठक बस्दैछ त्यसपछि त्यसपछि मात्रै के गर्ने कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । एक सदस्यले नेपाली हेल्थलाई बताए । सहकारीको रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको प्रस्तावित कलेजमा २ हजार ४ सय बढी सेयर सदस्य छन् ।
‘तसर्थ तपाईँले आजै देखि धुम्रपान नत्यागी सुखै छैन’
अनसन फिर्ता लिन डा. केसीलाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह